႐ုရွားက ေခတ္ပ်က္သူေဌးေတြ အခက္ေတြ႕ေနတဲ့ ပူတင္ရဲ့ ဥပေဒအသစ္ ( အဂိတိ လိုက္စားမူ ေခါင္းစဥ္နဲ႕ ႐ုရွားသူေဌးေတြကို ပူတင္ ၾကပ္လိုက္တဲ့ အကြက္ ....)
႐ုရွားက ေခတ္ပ်က္သူေဌးေတြ အခက္ေတြ႕ေနတဲ့ ပူတင္ရဲ့ ဥပေဒအသစ္ ( အဂိတိ လိုက္စားမူ ေခါင္းစဥ္နဲ႕ ႐ုရွားသူေဌးေတြကို ပူတင္ ၾကပ္လိုက္တဲ့ အကြက္ ….)
ရုရှားက ခေတ်ပျက်သူဌေးတွေ အခက်တွေ့နေတဲ့ ပူတင်ရဲ့ ဥပဒေအသစ် ( အဂိတိ လိုက်စားမူ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ရုရှားသူဌေးတွေကို ပူတင် ကြပ်လိုက်တဲ့ အကွက် ….)
ပြည်တွင်းပြည်ပမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားတာတွေ ဘဏ်ငွေစာရင်းတွေ ပိုင်ဆိုင်မူတွေ လက်ထဲမှာ စုဆောင်းထားတဲ့ငွေပမာဏတွေကို အပြည့်အစုံတင်ပြရမယ့် နိုင်ငံတော် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေသစ်ကို ပူတင်က မနေ့က လက်မှတ်ရေးထိုး အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ အခုပြဌာန်းလိုက်တဲ့ ဥပဒေအသစ်အရ နိုင်ငံသားတိုင်းဟာ လက်ထဲမှာ မိမိရဲ့ ၃ နှစ်ဝင်ငွေထက် ပို စုဆောင်းခွင့်မရှိပါဘူး။
ပိုနေတဲ့ ငွေတွေရှိရင် ရုရှားနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်နဲ့ လက်အောက်ခံအစိုးရဘဏ်တွေကို အပ်နှံထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံသားတွေရဲ့စုဆောင်းငွေကို လက်ထဲမှာ ထားတာထက်စာရင် အစိုးရဘဏ်တွေကို အပ်နှံထားတာ နိုင်ငံတော်စီးပွါးရေးဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုကို ပိုအကျိူးရှိစေမယ်လို့ ဥပဒေသစ်က ဆိုပါတယ်။ ပိတ်ဆို့မခံရသေးတဲ့ ရုရှားတွေအနေနဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားက ငွေတွေကို ရုရှားကို အမြန်ပြောင်းရွေ့ထုတ်ယူဖို့လည်း ရုရှားဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက
တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ ပိတ်ဆို့ခံထားရသူတွေအနေနဲ့လည်း ဘယ်လောက် ပိတ်ဆို့ခံထားရတယ်ဆိုတာ တင်ပြရမယ်လို့ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ အမှန်အတိုင်းတင်ပြမှုတွေကို အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ပေးမယ်လို့လည်း ဥပဒေက ဆိုထားပါတယ်။ အခုလို ဥပဒေပြဌာန်းရတာဟာ စီးပွါးရေး ပိတ်ဆို့ခံရသူတွေရဲ့ နစ််နာမှုတွေကို နိုင်ငံတော်က ပြန်လည်ကူညီနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်တယ်လို့လည်း ရုရှားဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြောပါတယ်။ မော်စကိုက စီးပွါးရေးသတင်းထောက်တွေကတော့
အခု ဥပဒေဟာ ရုရှားရဲ့ စီးပွါးရေးအခြေအနေ အရမ်းဆိုးဝါးသွားပြီဆိုတာကို ပြသသလို ခေတ်ပျက်ခရိုနီတွေကိုပါ အကြီးအကျယ်အခက်တွေ့စေမယ့်ဥပဒေဖြစ်တယ်လို့ သုံးသပ်ကြပါတယ်။
ရုရှားက ခတျေပကြျသူဌေးတှေ အခကျတှေ့နတေဲ့ ပူတငျရဲ့ ဥပဒအေသစျ ( အဂိတိ လိုကျစားမူ ခေါငျးစဉျနဲ့ ရုရှားသူဌေးတှကေို ပူတငျ ကွပျလိုကျတဲ့ အကှကျ ….)
ပွညျတှငျးပွညျပမှာ ရငျးနှီးမွုပျနှံထားတာတှေ ဘဏျငှစောရငျးတှေ ပိုငျဆိုငျမူတှေ လကျထဲမှာ စုဆောငျးထားတဲ့ငှပေမာဏတှကေို အပွညျ့အစုံတငျပွရမယျ့ နိုငျငံတောျ အဂတိလိုကျစားမှုတိုကျဖကြျရေးဥပဒသေစျကို ပူတငျက မနေ့က လကျမှတျရေးထိုး အတညျပွုလိုကျပါတယျ။ အခုပွဌာနျးလိုကျတဲ့ ဥပဒအေသစျအရ နိုငျငံသားတိုငျးဟာ လကျထဲမှာ မိမိရဲ့ ၃ နှစျဝငျငှထေကျ ပို စုဆောငျးခှငျ့မရှိပါဘူး။
ပိုနတေဲ့ ငှတှေရှေိရငျ ရုရှားနိုငျငံတောျဗဟိုဘဏျနဲ့ လကျအောကျခံအစိုးရဘဏျတှကေို အပျနှံထားရမှာဖွစျပါတယျ။ နိုငျငံသားတှရေဲ့စုဆောငျးငှကေို လကျထဲမှာ ထားတာထကျစာရငျ အစိုးရဘဏျတှကေို အပျနှံထားတာ နိုငျငံတောျစီးပှါးရေးဖှံဖွိုးတိုးတကျမှုကို ပိုအကြိူးရှိစမေယျလို့ ဥပဒသေစျက ဆိုပါတယျ။ ပိတျဆို့မခံရသေးတဲ့ ရုရှားတှအေနနေဲ့ နိုငျငံရပျခွားက ငှတှေကေို ရုရှားကို အမွနျပွောငျးရှေ့ထုတျယူဖို့လညျး ရုရှားဘဏ်ဍာရေးဝနျကွီးဌာနက
တိုကျတှနျးထားပါတယျ။ ပိတျဆို့ခံထားရသူတှအေနနေဲ့လညျး ဘယျလောကျ ပိတျဆို့ခံထားရတယျဆိုတာ တငျပွရမယျလို့ ဖေါျပွထားပါတယျ။ အမှနျအတိုငျးတငျပွမှုတှကေို အခှနျကငျးလှတျခှငျ့ ပေးမယျလို့လညျး ဥပဒကေ ဆိုထားပါတယျ။ အခုလို ဥပဒပွေဌာနျးရတာဟာ စီးပှါးရေး ပိတျဆို့ခံရသူတှရေဲ့ နစျနာမှုတှကေို နိုငျငံတောျက ပွနျလညျကူညီနိုငျဖို့ ရညျရှယျတယျလို့လညျး ရုရှားဘဏ်ဍာရေးဝနျကွီးဌာနက ပွောပါတယျ။ မောျစကိုက စီးပှါးရေးသတငျးထောကျတှကေတော့
အခု ဥပဒဟော ရုရှားရဲ့ စီးပှါးရေးအခွအေနေ အရမျးဆိုးဝါးသှားပွီဆိုတာကို ပွသသလို ခတျေပကြျခရိုနီတှကေိုပါ အကွီးအကယြျအခကျတှေ့စမေယျ့ဥပဒဖွေစျတယျလို့ သုံးသပျကွပါတယျ။